သငျသညျအမြိုးမြိုး antsy အတန်းထဲတွင်ရောက်နေသင်သည်အဘယ်ကြောင့်အစဉ်အဆက်သိချင်တော့လျှင်, အဘယ်ကြောင့်တစ်စုံတစ်ဦးကိုသင်မေးခွန်းများကိုတောငျးလြှငျသငျသညျ hoops ရိုက်ကူးသို့မဟုတ်တဝိုက်လမ်းလျှောက်နေစဉ်တွင်, ထို့နောက် kinesthetic သင်ယူမှုသည်သင်၏အရာဖြစ်စေခြင်းငှါသင်တို့ကိုလေ့လာရန်အဘို့အလွယ်ကူစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။ kinesthetic သင်ယူမှုကဘာလဲ? ဒီသင်ယူမှုစတိုင်အပေါ်အသေးစိတ်ကိုအောက်တွင်ဖတ်ပါ။
Kinesthetic သင်ယူ၏တစ်ခုဖြစ်သည် သုံးခုကွဲပြားခြားနားသောသင်ယူမှုစတိုင်များ နီးလ်ဃသဖြင့်ခေတ်စားလာ
သင်ယူမှုသူ၏ VAK မော်ဒယ်အတွက် Fleming က။ အတိုချုပ်ပြောရရင်တစ် kinesthetic သင်ယူသူအမှန်ပစ္စည်းများ "get" နိုင်ရန်အတွက်လေ့လာသင်ယူနေချိန်တွင်တက်ကြွစွာတစ်ခုခုလုပ်နေရန်လိုအပ်ပါသည်။ မကြာခဏတစ် kinesthetic သင်ယူမှုစတိုင်နှင့်အတူသူတို့ခန္ဓာကိုယ်သူတို့နားထောင်နေတဲ့အခါမှာတစ်ခုခုလုပ်နေတာသောကွန်နက်ရှင်လုပ်မထားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ပို့ချချက်များကဲ့သို့အထိုင်များအမှုအရာစဉ်အတွင်းလေ့လာသင်ယူခဲအချိန်ရှိသည်သွားနေကြသည်။ အချိန်အများကြီးသူတို့တက်ရမှတ်ဉာဏ်သို့တစ်ခုခုထားရန်ရွှေ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Kinesthetic သင်ယူသူဆရာသင့်လျော်စွာမိမိတို့၏အာရုံကိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်လျှင်သူတို့ကိုစာသင်ခန်းထဲမှာအောင်မြင်မှုအောင်မြင်ရန်ကူညီနိုငျသောများစွာသောအားသာချက်များရှိသည်။ ဤတွင်သူတို့အားအားသာချက်၏အနည်းငယ်ရှိပါတယ်။
Excellent ကမော်တာမှတ်ဉာဏ် (တစ်ချိန်ကကြောင့်လုပ်နေတာပြီးနောက်တစ်ခုခုပွားနိုင်သည်)
ကျောင်းသားများအဘို့အ Kinesthetic သင်ယူမဟာဗျူဟာ
သင်တစ်ဦး kinesthetic သင်ယူသူနေ, သင်သင်ဤအမြန်ဆယ်-မေးခွန်းတစ်ခုကိုပဟေဠိတွေနဲ့လျှင်သင်ယူသောအခါသင်တို့သည်ဤအမှုအရာအထောကျအကူရှာတွေ့နိုင်ပါစေဒီနေရာမှာထွက်ရှာတှေ့နိုငျပါ။
သငျသညျလှည့်လည်ရန်သင့်စိတ်ကိုစတင်ခံစားနေသည့်အခါထရပ်တယ်။ သငျသညျအထက်တန်းကျောင်းသို့မဟုတ်အလယ်တန်းကျောင်းအတွက်ဆိုရင်, ဒါကြောင့်သင်နှောင့်အယှက်အဖြစ်တံဆိပ်ကပ်မရင့်ပထမဦးဆုံးရှေ့တော်၌ထိုဆရာကိုမေးပါ။
လေ့လာနေသည့်အခါသငျသညျမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်းနေအခါ, ထိုအုတ်ရိုးသို့မဟုတ်ကြမ်းပြင်ဆန့်ကျင်နေတဲ့တင်းနစ်ဘောလုံးကို bounce ။
သင်ဖတ်နေချိန်မှာမှတ်စုမျဉ်းတား, မီးမောင်းထိုးပြသို့မဟုတ်ပါစေ။ ထိရောက်စာဖတ်ခြင်းမဟာဗျူဟာများအသုံးပြုခြင်းကိုသင်အာရုံစိုက်နေဖို့ကူညီပေးပါမည်။
စွမ်းအင်အချို့ကိုလွှတ်တက်ဆင်းနေတဲ့ခြေထောက် bounce ။
ဆရာများအဘို့အ Kinesthetic သင်ယူမဟာဗျူဟာ
ဒီသင်ယူမှုစတိုင်နှင့်အတူကျောင်းသားများမကြာခဏသူတို့၏အလောင်းများကိုသင်ယူနိုင်ရန်အတွက်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုထဲမှာရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်မျှသာရှိသောကြောင့်, antsy သို့မဟုတ် hyper, ပြဿနာ, fidgety ဟုခေါ်ကြသည်။ သင်တစ်ဦးဆရာဆိုရင်, ဒီသင်တစ်ဦးဟောပြောပွဲကာလအတွင်းသတင်းအချက်အလက်ထပ်ဆင့်လွှင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါသူကအတန်းထဲတွင်ရပျလုံးကိုကျော်လမ်းညွှန်ကျောင်းသားတစ်ဦးရှိသည်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအထူးသဖြင့်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စီမံခန့်ခွဲရန်ခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦး kinesthetic သင်ယူမှုအမျိုးအစားရှိသူများကျောင်းသားများကိုရောက်ရှိဤနည်းဗျူဟာများကြိုးစားပါ:
တစ်ဦးဟောပြောပွဲစဉ်အတွင်းသူတို့အခြားကျောင်းသားများနှောင့်အယှက်မည်မဟုတ်လျှင် kinesthetic သင်ယူသူ, မတ်တပ်ရပ်မိမိတို့၏ခြေထောက်များ bounce, ဒါမှမဟုတ် doodle ခွင့်ပြုသည်။ သူတို့တစ်တွေနည်းနည်းန်းကျင်ရွှေ့နိုင်မယ်ဆိုရင်သင်ဟာလူတန်းစားအတွက်သူတို့အထဲကပိုပြီးရလိမ့်မယ်။
, ပို့ချချက်ဖတ်, အုပ်စုတစုအလုပ်, စမ်းသပ်ချက်, စီမံကိန်းများ, ကစား, etc တွဲ, ဒါကြောင့်သင်အံ့အားသင့်ခြင်းနှင့်သင်တစ်ဦးကိုဖြောင့်-ရှေ့ဆက်ထုံးစံ၌ပစ္စည်းကိုတင်ပြချင်သောရက်ပေါင်းကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည့် kinesthetic သင်ယူသူစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ် - ညွှန်ကြားချက်အမျိုးမျိုးနည်းလမ်းများကမ်းလှမ်းရန် ။
သင့်ရဲ့ kinesthetic သင်ယူသူပစ္စည်းအပေါ်တစ်ဦးသင်ထောက်ကူထုတ်ဖြည့်ဆည်းသို့မဟုတ်ကဲ့သို့ဟောပြောပွဲစဉ်အတွင်းတာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်ဖူး မှတ်စုတာ ။ ဒါဟာသူတို့ကိုကပဲသူတို့ရဲ့လက်ရွေ့လျားနေသောင်လျှင်ပင်အာရုံစူးစိုက်ကူညီပေးပါမည်။
သူတို့အားကျောင်းသားများ, တာဝန်တွေပြန်ဖြတ်သန်းဉာဏ်စမ်းပဟေဠိထွက်လိုက်တာနဲ့, အ chalkboard ပေါ်မှာစာရေးသားခြင်း, ဒါမှမဟုတ်ပင်စာသင်ခုံများအားပြန်လည်စီစဉ်ခြင်းနှင့်တူပို့ချချက်မီနှင့်အပြီးလှုပ်ရှားမှုတာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုရန်။
သငျသညျအတနျးထဲမှာကွာသည်သင်တို့ထံကချော်အဆိုပါ kinesthetic သင်ယူသူခံစားရလျှင်, လူတိုင်းကိုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်တစ်တန်းလုံးရှိစာသင်ခုံကူးပြောင်းခြင်းန့ချီတက်တူသောလုံ့လရှိသူတစ်ခုခု (အခန်း၏ညာဘက်အခြမ်းနှင့်အတူအခန်း switch ကိုအစက်အပြောက်များ, လက်ဝဲဘက်) လုပ်ပါ။ ရွေ့လျားနေသော့လုပ်ရပ်တခုသင်ယူသူရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာ switch ကိုလှန်သူတို့ကိုအာရုံစိုက်ပြန်လည်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
တိုတိုနှင့်ချိုမြိန်သင့်ရဲ့ပို့ချချက် Keep! အားလုံးသင့်ရဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့သင်ယူသူအောက်မေ့ဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်အတန်းတစ်လျှောက်လုံးကွဲပြားခြားနားသောလှုပ်ရှားမှုများကိုစောင့်ပါ။ စီစဉ်တဲ့အခါမှာ, မင့်ကို "လွယ်ကူသော" ကျောင်းသားများ, သင့်ရဲ့အတန်းထဲတွင်လူတိုင်းထိတွေ့ဆက်ဆံလိမ့်မည်ဟုလှုပ်ရှားမှုများထည့်သွင်းဖို့ကြိုးစားပါ။
ခြောက်နေ့ရက်များ Away တစ်ဦးစမ်းသပ်မှုအတွက်လေ့လာမှုဇယား
ဆက်စပ်အကြောင်းအရာသင်ထောက်ကူအတွက် High School တွင်ဝေါဟာရ
စာရေးသူရဲ့ Tone ကဘာလဲ?
အဆိုပါ Planet ကိုတွင်အကြီးမားဆုံး Surfable လှိုင်းတံပိုးတို့သည် 10
Ice Cream ၏သမိုင်းအကျဉ်း
4 x ကိုက 100 Relay လူမျိုးတို့အတွက်မဟာဗျူဟာများ
Dandelions အရောင်များအတွက် Burn ပါသလား
Clatonia Joaquin ကို Dorticus
ဂျပန်နှုတ်ကပတ်တော်ကို "Tanoshii" ၏အဓိပ္ပာယ်နှင့်အင်္ဂလိပ်
Rey Mysterio ကိုယ်ရေးဖိုင်
ဒါကလ "ပြည်သူ့ Going" Cell Phone နံပါတ်ဖြစ်ပါသလား
အဆိုပါသေ Coniferous Tree ရောဂါများ
Oprah Winfrey ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
တစ်ဦးစားသောက်ဆိုင်ထဲမှာ "သင်မှာလို" အသုံးပြုခြင်း
စျေးအကြီးဆုံး Element ကိုဆိုတာဘာလဲ
အဆိုပါချိန်ကုမ္ပဏီ: ကစားစရာ, Tins နှင့် Wastebaskets
မှ Ian Brady နှင့် Myra Hindley နှင့်မူးရလူသတ်မှု
ကျောင်းသားများ ESL မှ Phrasal ကြိယာမိတ်ဆက်ခြင်း
ကျိုင်းကောင်, Crickets ကိုနှင့်နှံကောင်, အမိန့် Orthoptera
ဘယ်လို FDR ကျေးဇူးတုံ့ပြန် Changed